मास्को गर्न व्लादिमीर देखि महानगरीय विभाग हस्तान्तरण (तारीख)
रूसी राज्य को विकास मा एक महत्वपूर्ण चरण र मास्को को वृद्धि - व्लादिमीर देखि महानगरीय विभाग मास्को स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। अनुपम भौगोलिक स्थान, बढ्दो प्रभाव र मास्को राजकूमारद्घारा शासित राज्य को उत्तर-पूर्वी राज्य अमेरिका मा र मास्को को नीति जडान चाँडै मास्को रूसी शक्ति को नयाँ केन्द्र बनेको अगुवाहरू।
इतिहास, Andreya Bogolyubskogo, मास्को को उल्लेख को मृत्यु पछि लिखित तिनीहरूले Muscovites बाँचिरहेको शहर रूपमा - मास्को बासिन्दाहरू। शहर नाम समय धेरै सैन्य घटनाहरूको वर्णक्रम देखि लेखएको इतिहास पाइन्छ। मास्को मित्र मिलन र शत्रुहरूको onslaught प्रतिबिम्बित जहाँ नक्सामा बिन्दु बनेको छ। सानो शहर द्रुत हाल विशेष शहर व्यक्तिगत शासनकालको बन्दैछ। मास्को गर्न व्लादिमीर देखि महानगरीय विभाग स्थानान्तरण चौधौँ शताब्दीमा को बीचमा, उत्तरार्द्ध आवश्यक आकार र प्रभाव छैन भने ठाउँ लिन छैन।
नयाँ अर्थोडक्स केन्द्र गठन
इवान कलिता मास्को को प्रसिद्ध केन्द्र गरे, मात्र राजनीतिक तर पनि धार्मिक जीवन। कि पहिला, उपासनाको केन्द्र र महानगरीय व्लादिमीर को स्थायी निवास को एक स्थान Klyazma थियो। समय को खण्ड र विद्रोही अगुवाहरू तातार कठपुतलीहरू र आफ्नै विद्रोही lyudom बीच निरन्तर maneuvering व्लादिमीर को मूल्य कम। Tiberias - रूसी अर्थोडक्स केन्द्र को स्थिति को लागि युद्धमा मास्को र यसको अनन्त प्रतिद्वन्द्वी बीच erupted।
महानगरीय लागि संघर्ष
महानगरीय व्लादिमीर विभाग देखि स्थानान्तरण मास्को र Tver बीच एक तीतो संघर्ष सँगसँगै थियो। देशमा को अगुवाहरू आफ्नो पक्षमा सबै शक्तिशाली Mongols सम्भ्काउनु गर्न प्रयास, को तातार खान खुसी पार्न खोजे vied। यसैबीच, Constantinople मा Tver monasteries को भिक्षु को एक एक उजुरी लेखे महानगरीय पत्रुस। तथ्य simony (चर्च कार्यालय को वितरण) व्यक्त गरेका थिए र बेवास्ता चर्च जिम्मेवारी।
सबै रूस प्रभु लागि जम्मा गर्न एउटा वास्तविक खतरा छ। तर यस्तो घटना धेरै रूसी पादरी को अनुमोदन बिना सम्भव छैन, र चर्च को मामिलामा तातार khans र आफ्नो दलाल हस्तक्षेप गर्न रुचाउँछु। तिनीहरूलाई लागि महत्त्वपूर्ण रूसी अगुवाहरू द्वारा नियमित ल्याए पनि कर र आदर थिए। र जीवन Khans आध्यात्मिक पक्ष राजनीति छलफल गर्न उपयुक्त र चर्च कुनै प्रभाव छ।
महानगरीय को सिंहासन पत्रुसले चढाई को मास्को अगुवाहरू को प्रभाव बिना थियो। अर्थोडक्स भन्दा आध्यात्मिक अधिकार पत्ता पत्रुसले चढाएको सेवाहरू भूल गरेको छैन र पूरै Muscovite शासक समर्थन गर्दछ। उहाँले नै ठाउँमा, मास्को बस्थे थियो र मृत्यु र गाडे। को मास्को अगुवाहरू को धेरै भेटी र निवेदन आफ्नो काम गरे - देर महानगरीय पत्रुस पहिलो मास्को को नाम र सबै रूस Wonderworker अन्तर्गत canonized थियो। मास्को मा Klyazma मा महानगरीय व्लादिमीर विभाग देखि स्थानान्तरण पहिले नै आधा सम्झौता गरेको थियो।
चमत्कारी कामदार गर्न उत्तराधिकारी
पत्रुस भर्खरै भनिन्छ ग्रीक Fiognost द्वारा सफल भएको थियो। 1327 को अन्त्यमा Constantinople को कुलपिता यशैया मास्को मा स्थायी सेवाको संग कीव को महानगरीय तिनलाई नियुक्त।
1328 मा Fiognost को गलिसियन् र लिथुनियन् अगुवाहरू को अनुरोध मा छुट्टै archdiocese विनियोजन गरिएको छ जो, उत्तर-पूर्वी रूसी भूमि, भ्रमण गर्नुभएको थियो। तर Fiognosta भद्र प्रान्तीय शहर कुलपिता को स्थिति अनुरूप थिएन। आफ्नो उद्देश्य नै अर्थोडक्स पार अन्तर्गत उत्तरी र पूर्वी रूस एकजुट थियो। अन्ततः मास्को गर्न व्लादिमीर देखि महानगरीय विभाग स्थानान्तरण गर्न सम्भव भयो जब कि छ। आगामी घटनाको मिति Constantinople संग सहमत भएको छ। Fiognost सबै ज्ञात रूसी शहर पार गर्न र मास्को को अर्थोडक्स संसारको एक साधारण केन्द्र बनाउन बाहिर सेट।
राजधानी को उपलब्धि
यदि यो नयाँ महानगरीय यस सक्रिय समर्थन गरिएको थियो सायद महानगरीय राजकुमार कलिता द्वारा मास्को गर्न व्लादिमीर विभाग को स्थानान्तरण र ठाउँ लिन छैन। को धारणा चर्च को आफ्नो निर्माणाधीन पूरा भएको थियो, र 1328 मा, दुई ढुङ्गा चर्च निर्माण गरियो - राजधानी लागि नवीनता को एक नसुनिएका। सेन्ट पीटर प्रेरित र सेन्ट Ivana Lestvichnika को चर्च मास्को महत्त्व बलियो अर्को चरण भयो।
को औपचारिक स्थानान्तरण
महानगरीय कार्यालय मा 14 औं शताब्दीमा Theognost सक्रिय काम को मध्य-30 सेकेन्ड मा पहिलो महत्वपूर्ण नतिजा ल्यायो। को canonization चमत्कार कामदार तीर्थयात्रीहरू र पादरी को धेरै मास्को पत्रुस आकर्षित। स्थायी हिंसात्मक धार्मिक गतिविधिहरु Constantinople को Patriarchate द्वारा unnoticed पार गरेनन् - नयाँ महानगरीय को प्रभाव सबै रूसी मुलुकमा विस्तार गर्नुहोस्।
उच्चतम स्तर मा मास्को गर्न महानगरीय व्लादिमीर विभाग को स्थानान्तरण छलफल गर्न थाले। 1326 अन्तिम निर्णय एक अवधि थियो। को मास्को अगुवाहरू पूर्ण अनुमोदन, पहिले नै "सबै रूस", Constantinople को कुलपिता र काम पूरा गर्न सुनौलो गिरोह को गैर-हस्तक्षेप को नीति लागि समर्थन को शीर्षक पहने थियो। मास्को गर्न व्लादिमीर देखि महानगरीय विभाग हस्तान्तरण पूरा भएको थियो।
प्रवास को नतिजा
यो घटना मास्को को राजकुमार लागि एउटा कोसेढुङ्गो थियो। यो आध्यात्मिक यसलाई equating, धर्मनिरपेक्ष अधिकार को स्थिति वृद्धि गर्छ। Fiognost को मास्को राजकूमारद्घारा शासित राज्य गर्न छिमेकी मुलुकमा को अभिवृद्धि मा बाद मदत, छेउमा Ivana Kality मा सम्पूर्ण थियो। उदाहरणका लागि, आयातित र व्यक्तिहरूलाई मा, तर पनि शहर र देशमा मात्र होइन श्राप हटाउन प्रसिद्ध को व्यापक Fiognost सुअवसर। त्यसैले उहाँले तिनीहरूले यसरी नयाँ raids र विनाश मा सुनौलो गिरोह मालिक प्रोभोकिंग, Tver खान Ulugbek को राजकुमार दिन इन्कार गरे भन्ने तथ्यलाई लागि पेस्कोभ र यसको environs को मान्छे मा एक श्राप राखे। अभिशाप मूर्त परिणाम दिए - राजकुमार Tverskoy Aleksandr Mihaylovich को पेस्कोभ बायाँ र लिथुआनिया को ग्रैंड Duchy गए। यो पछि, श्राप उठाएर थियो।
को अर्थोडक्स संसारको केन्द्रको रूपमा मास्को को गठन
यो मास्को गर्न महानगरीय व्लादिमीर को परिवहन विभाग को नयाँ राजधानी ल्याएको सबै लाभ को पूर्ण मूल्यांकन दिन गाह्रो छ। यो घटना (1326) को मिति मास्को राजकूमारद्घारा शासित राज्य को जीवन मा एक मोड रूपमा वर्णक्रम देखि लेखएको इतिहास र इतिहास धेरै प्रतिबिम्बित गरिएको छ।
यन्त्र, र सांसारिक र आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्माण्डको पुरातन अवधारणा अनुसार बराबर र एकताबद्ध छन्। तसर्थ, वास्तवमा बस्ने नै समय र सम्राट र महानगरीय मा शहर को राज्य मा, एक प्राकृतिक र मनमोहक थियो।
राजनीति र चर्च
यी सिद्धान्तमा आधारित, र धर्मनिरपेक्ष र आध्यात्मिक शक्ति मास्को गर्न महानगरीय व्लादिमीर विभाग को स्थानान्तरण गर्न उत्तिकै लाभदायी थियो। वर्ष 1328 यो अवधिमा विशेष गरी राम्रो चिन्ह लगाइएको स्मरणीय chroniclers चर्च पर्वहरू थियो।
यो मास्को राजकूमारद्घारा शासित राज्य र सुनौलो गिरोह को अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण coexistence को एक समय थियो - मास्को धनी र समृद्ध भयो। राजकुमार गरेको अदालत र नजिकका स्थित महानगरीय को अदालत र शान र धन आपसमा कमसल छैन। रसीला processions र Bishops गर्न प्रस्तुति को अवसरमा उपासनाको क्रीम को राजधानी भेला चर्च वर्गीकरणका पूर्वी रूसी मुलुकमा देखि र Constantinople नै उच्च र्याङ्किङ्ग पाहुनाहरूसँग। सबै sumptuous चाडहरूमा मानिसहरूको ठूलो जमघट संग मास्को मा आयोजित थियो। वरपरको देशमा मास्को गरेको दावी चुनौती सक्छ, तर धार्मिक अधिकार अकाट्य थियो: मास्को को महानगरीय खतरामा परेको थियो बेवास्ता excommunication संग।
यो किन भयो
मास्को गर्न महानगरीय व्लादिमीर विभाग को स्थानान्तरण अझै आयोजित किनभने जो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य को एक, महत्वपूर्ण लाभ र भत्ता को एक किसिम प्रदान गर्न भएको थियो। विशाल - छिमेकी प्रधानहरू मा चर्च अधिकारीहरूले प्रतिनिधिको द्वारा पाएको तुलनामा लाभ को नसुनिएका र दानको थिए। मास्को अगुवाहरू risked केही - आफ्नो स्थिति तिनीहरूले वफादार भएको Bishops बीच निर्धक्क चयन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बलियो थियो। महत्त्वपूर्ण भूमिका अनुपम द्वारा प्ले मास्को को भौगोलिक स्थिति, र Constantinople संग सम्बन्ध को निकटता। एउटा महत्त्वपूर्ण तर्क सबै रूस को महानगरीय चर्च अधिकारीहरु बीच जो कोहि रुचिहरु मा उल्लंघन गर्दैन भन्ने तथ्यलाई थियो, त्यसैले सबै Bishops उत्तिकै वफादार थियो। महानगरीय पत्रुस मास्को Patriarchate को श्रेष्ठता बन्ने सुरु, र आफ्नो उत्तराधिकारी योग्य समाप्त भएको अर्थोडक्स विश्वासको राजधानी मास्को को परिवर्तन।
ठूलो उत्तरी युद्ध
सिविल युद्ध समयमा agrarian नीति कस्तो सुविधाहरू सेतो सरकारको थियो?
कठपुतली जालसाजी "दानव उच्च।" मूल कसरी भेद गर्न?
ओवनमा कचौरामा चावलको लागि नुस्खा, मल्टीवार्कमा। शाकाहारी व्यञ्जन
हाम्रो भान्सा लागि प्राकृतिक सामाग्री को सुन्दर प्यानल बनाउन
मानसिक घटना र मानिसको भित्री संसार
2012 मा टिन्टिङ लागि दण्ड
"ZIL" बोट। Likhachev प्लान्ट (ZIL) - ठेगाना